ဒီနခေ့တျေမှာ လူတိုငျးဟာ အရာရာကို မွနျမွနျဆနျဆနျ လိုခငျြလာကွပါတယျ။ ဒီလို မွနျမွနျဆနျဆနျဆိုတဲ့ အရာတှထေဲမှာမှ ကိုယျ့ဘဝအတှကျ အမှနျတကယျအကြိုးရှိမယျ့ အောငျမွငျမှုကို ဘယျလိုမွနျမွနျဆနျဆနျ ရယူမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးတှကေို လလေ့ာကွပါစို့။
(၁) တိကသြော ပနျးတိုငျကို ခမြှတျပါ။
အောငျမွငျမှုမြားရရှိစရေနျ အဓိကအနနေဲ့ မိမိက ဘယျနယျပယျမှာ ကြှမျးကငျြတာလညျး၊ ဘယျနယျပယျမှာ အောငျမွငျခငျြတာလညျး၊ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာထိ အောငျမွငျခွငျတာလညျး . . . . . အစရှိသညျ့ မိမိဘ၀ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးအတှကျ တိကသြော ဦတညျးခကျြ ပနျးတိုငျကို ခမြှတျပါ။
(၂) ကောငျးမှနျသညျ့အကငျြ့မြားကို ထပျတလဲလဲ လုပျဆောငျပါ။
ထပျတလဲလဲ ကငျြ့ကွံပွုမူခွငျးအားဖွငျ့ ကွီးမားသော အကြိုးကြေးဇူးကို ရရှိစနေိုငျသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ နစေ့ဉျ ညအိပျခါနီးတိုငျး တဈနာရီခနျ့ စာဖတျတယျဆိုပါဆို့။ ဒီလိုစာဖတျခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ စာဖတျစှမျးရညျကို တိုးတကျစနေိုငျသညျ။ မှတျဉာဏျကိုတိုးတကျစနေိုငျသညျ။ ဒီလိုစာဖတျခွငျးနဲ့အလားသဏ်ဍာနျတူ ကိုယျဘဝအတှကျ တိုးတကျစနေိုငျမယျ့ မညျသညျ့ကောငျးမှနျတဲ့အကငျြ့ကိုမဆို ထပျတလဲလဲ လုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။
(၃) မိမိအား အမှနျတကယျ လမျးညှနျပွသနိုငျမညျ့တဈဦးကို ဆရာတငျပါ။
အောငျမွငျမှုမြားစှာရှိသောသူမြားတှငျ တူညီသောအခကျြတဈခုရှိသညျ။ ၎င်းငျးမှာ လိုအပျခကျြမြားကို အမှနျတကယျ လမျးညှနျပွသပေးနိုငျသော ဆရာတဈဦးဆီ ရှိနခွေငျးပငျ။ ထိုဆရာလို့ဆိုရာမှာ သငျဆရာ၊ မွငျဆရာ၊ ကွားဆရာ အားလုံးပါဝငျပါတယျ။ ဒီလို ဆရာတှထေံမှ မိမိဘဝအောငျမွငျရေးအတှကျ နညျးလမျးမြား၊ လမျးညှနျခကျြမြားကို ရရှိနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
(၄) သငျ၏အောငျမွငျမှုလမျး ခြောမှပေ့ါစေ။
အပွုသဘောဆောငျသော နညျးလမျးမြားက အောငျမွငျမှုကို လြှငျမွနျစှာ တိုးတကျစနေိုငျပါတယျ။ အကငျြ့ဆိုးမြားနဲ့ အခြိနျဖွုနျးတီးခွငျးတှကေတော့ ဆနျ့ကငျြ့ဘကျ အကြိုးသကျရောကျမှုကို ရရှိစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အကငျြ့ဆိုးတှကေို ဖယျဖြောကျပါ။ သငျလြှောကျရမညျ့ အောငျမွငျမှုလမျး ရိုးရှငျးစှာဖွတျသနျးရငျ ခြောမှပေ့ါစေ။
(၅) မလိုလားအပျသညျ့ကိစ်စရပျမြားအတှကျ “NO” ဟုပွောရနျ မနှောငျ့နှေးပါနှငျ့။
(၆) ငှကွေေး စီမံခနျ့ခှဲတတျပါစေ။
ငှကွေေးကို မှနျကနျစှာ စီမံခနျ့ခှဲပါ။ ငှကေိုစုပါ။ မလိုအားအပျတဲ့ကိစ်စတှမှော ငှကွေေးတှဖွေုနျးမိတာ၊ အသုံးအဖွုနျးကွီးတာတှကေ သငျရဲ့အောငျမွငျမှုလမျးရဲ့ ဆူးညှောငျ့ခလုတျတှေ ပါ။ ငှကွေေးကို မှနျမှနျကနျကနျ စီမံသုံးစှဲပါမှ ကိုယျက ငှရေဲ့အရှငျသခငျဖွဈလာမှာပါ။
(၇) အမှားမြားမှတဆငျ့ လလေ့ာပါ။
တိုးတကျမှုကိုအာရုံစိုကျပါ။ အမှားမြားမှတဆငျ့ သငျခနျးစာယူပါ။ ထိုသို့သငျခနျးစာရယူနိုငျမညျဆိုပါက ပိုမို ပါငျးရညျနပျရညျရှိလာပွီး အောငျမွငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျမယျ့အခကျြတဈခုလညျးလညျးဖွဈလာမှာပါ။ ကိစ်စရပျတဈခုခုကို ဆောငျရှကျတဲ့အခါမှာ မိမိကိုယျတိုငျမှားခဲ့တဲ့အမှား၊ သူတပါးမှားခဲ့တဲ့အမှား၊ မှားလမှေ့ားထရှိတဲ့အမှား . . . . . အစရှိတဲ့ အမှားမြားကို သတိပွု၍ ထိုသို့အမှားမြိုး ထပျမံမဖွဈရလအေောငျ ကွိုးစားပါ။
ဒီလိုအခကျြတှကေို လိုကျနာခွငျးအားဖွငျ့ အောငျမွငျမှုမြားကို အလြှငျအမွနျ ရရှိနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းဟာ အရာရာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လိုချင်လာကြပါတယ်။ ဒီလို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆိုတဲ့ အရာတွေထဲမှာမှ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိမယ့် အောင်မြင်မှုကို ဘယ်လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် ရယူမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လေ့လာကြပါစို့။
(၁) တိကျသော ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ပါ။
အောင်မြင်မှုများရရှိစေရန် အဓိကအနေနဲ့ မိမိက ဘယ်နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်တာလည်း၊ ဘယ်နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်ချင်တာလည်း၊ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်ခြင်တာလည်း . . . . . အစရှိသည့် မိမိဘ၀ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် တိကျသော ဦတည်းချက် ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ပါ။
(၂) ကောင်းမွန်သည့်အကျင့်များကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်ပါ။
ထပ်တလဲလဲ ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းအားဖြင့် ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် နေ့စဉ် ညအိပ်ခါနီးတိုင်း တစ်နာရီခန့် စာဖတ်တယ်ဆိုပါဆို့။ ဒီလိုစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ စာဖတ်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဒီလိုစာဖတ်ခြင်းနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူ ကိုယ်ဘ၀အတွက် တိုးတက်စေနိုင်မယ့် မည်သည့်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုမဆို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
(၃) မိမိအား အမှန်တကယ် လမ်းညွှန်ပြသနိုင်မည့်တစ်ဦးကို ဆရာတင်ပါ။
အောင်မြင်မှုများစွာရှိသောသူများတွင် တူညီသောအချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၄င်းမှာ လိုအပ်ချက်များကို အမှန်တကယ် လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်သော ဆရာတစ်ဦးဆီ ရှိနေခြင်းပင်။ ထိုဆရာလို့ဆိုရာမှာ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလို ဆရာတွေထံမှ မိမိဘ၀အောင်မြင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄) သင်၏အောင်မြင်မှုလမ်း ချောမွေ့ပါစေ။
အပြုသဘောဆောင်သော နည်းလမ်းများက အောင်မြင်မှုကို လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကျင့်ဆိုးများနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းတွေကတော့ ဆန့်ကျင့်ဘက် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖယ်ဖျောက်ပါ။ သင်လျှောက်ရမည့် အောင်မြင်မှုလမ်း ရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းရင် ချောမွေ့ပါစေ။
(၅) မလိုလားအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် “NO” ဟုပြောရန် မနှောင့်နှေးပါနှင့်။
(၆) ငွေကြေး စီမံခန့်ခွဲတတ်ပါစေ။
ငွေကြေးကို မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲပါ။ ငွေကိုစုပါ။ မလိုအားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ငွေကြေးတွေဖြုန်းမိတာ၊ အသုံးအဖြုန်းကြီးတာတွေက သင်ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းရဲ့ ဆူးညှောင့်ခလုတ်တွေ ပါ။ ငွေကြေးကို မှန်မှန်ကန်ကန် စီမံသုံးစွဲပါမှ ကိုယ်က ငွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လာမှာပါ။
(၇) အမှားများမှတဆင့် လေ့လာပါ။
တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ အမှားများမှတဆင့် သင်ခန်းစာယူပါ။ ထိုသို့သင်ခန်းစာရယူနိုင်မည်ဆိုပါက ပိုမို ပါင်းရည်နပ်ရည်ရှိလာပြီး အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်အချက်တစ်ခုလည်းလည်းဖြစ်လာမှာပါ။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တဲ့အမှား၊ သူတပါးမှားခဲ့တဲ့အမှား၊ မှားလေ့မှားထရှိတဲ့အမှား . . . . . အစရှိတဲ့ အမှားများကို သတိပြု၍ ထိုသို့အမှားမျိုး ထပ်မံမဖြစ်ရလေအောင် ကြိုးစားပါ။
ဒီလိုအချက်တွေကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် အောင်မြင်မှုများကို အလျှင်အမြန် ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။